China 2.5% broiler na -enye nri nrụpụta na nrụpụta ụlọ ahịa | Otu RC
concentrates bụ ngwakọta nke vitamin niile achọrọ, mineral, trace elements na mgbakwunye dị ka antioxidants, pigments na enzymes agwakọtara na protein na -agbari ngwa ngwa. A na -emepụta mkpokọta protein na -adabere na mkpa nke ụdị niile, gụnyere anụ ọkụkọ, anụ na anụ ezi. Isi nri dị na ntinye nsonye site na 2,5% ruo 35% nke nri zuru oke, ha niile dabere na mmasị onye ahịa.
A na -emepụta mkpokọta nri na -adabere n'ihe anụmanụ chọrọ na ngwakọta dị na mpaghara. Ọ bụ uru na -agwakọtala ihe ndị dị mkpa na nnukwu protein dị ka nri ga -adị mfe ịgwakọta ma rụpụta ngwaahịa ka mma na nke ọzọ. Uche ndị ahụ na-akwụsi ike ma dịkwa mfe iji maka imepụta nri anụmanụ dị elu, na-eme ka ndị ọrụ ugbo nweta nsonaazụ kacha mma.
ConcentBroiler na -etinye uche: iji hụ na uto kacha mma, oriri oriri na oke mgbanwe ntụgharị nke pụtara anụ karịa kilogram nri.
ConcentLayer na -etinye uche: na -abawanye pasent ịtọba yana na -ebuli nha akwa na ịdị mma na -ebute nsen na -atọ ụtọ.
Ihe nlebara anya: na -akpali oriri, ezigbo uto na nkwado nke mgbaze na -ahụ maka anụ ezi kacha mma na ọnụ ahịa dị ọnụ ala.
A na-eme premix site na mineral, vitamin na trace elements, a na-etinyekwa ọtụtụ ihe mgbakwunye dị ka enzymes, amino acid, mmanụ dị mkpa, ihe ọkụkụ, wdg. Premix bụ ihe dị mkpa maka nhazi nri. Ọ na -emezigharị ma na -ahazi akụrụngwa, iji gboo mkpa anụ ụlọ.
Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3, Vitamin B1, Vitamin B2, VitaminB6, Vitamin B12, Nicotinic acid, D-Calcium pantothenate, Folic acid, D-biotin, Ferrous sulfate, sulfate ọla kọpa, sulfate zinc, manganese sulfate, Sodium selenite, Calcium iodate, DL-Methionine, L-lysine hydrochloride, Calcium hydrogen phosphate, Choline chloride, sodium chloride, calcium carbonate, calcium bicarbonate, phytase, Lactobacillus phytate, mannanase, protease etc.
Site na nri agwakọtara
-broiler: 2.5kg ọ bụla ngwaahịa a na -agwakọta na nri 100kg.
Nke gara aga: 5% nri broiler na -eri nri premix
Osote: Florfenicol 10mg+mbadamba ụrọ multivamin
Nri Nri Broiler
5% nri ewu ewu
3% ọkwa ọkwa ọkwa ikpeazụ